Tilmaamaha iyo qiimaha Vivo Z5i ayaa la daadiyey | Androidsis
Taleefankii ugu dambeeyay ee Vivo ee la soo saaray ayaa ahaa Vivo Y5s, taas oo runtii ah nooc magac laga beddelay oo ka mid ah Vivo Y19 la sii daayay wax yar ka hor tan. Terminalka xiga ayaa la filayaa inuu noqdo Vivo s5, kaasoo horeyba si rasmi ah loo qorsheeyay inuu rasmi ahaado 15-ka Nofeembar.
Wax walba waxay umuuqdaan inay muujinayaan in soo-saaraha uu doonayo inuu kujiro duub, maadaama ay sidoo kale leedahay mobilo kale oo la qorsheeyay muddo gaaban. Midkani wuxuu ku yimaadaa magaca Vivo Z5i wuxuuna noqon doonaa aalad dhexdhexaad ah. Qeexitaannadiisa farsamo iyo astaamaha qiimaha waxay ku socdeen baxsad, waana tan waxa aan uga hadlayno xiga.
Su'aasha, Liiska Shiinaha Telecom wuxuu muujinayaa in Vivo Z5i lagu qiimeeyo 1,998 yuan (~ 265 euro ama $ 286 qiimaha sarifka), in kasta oo aan la ogeyn nooca gaarka ah ee qiimahaas leh. Maaddaama moobiilku wali sir yahay, waxaa lagugula talinayaa inaad sugto xaqiijinta rasmiga ah ee qiimaheeda.
Bixiyeyaasha Vivo Z5i
Liisku wuxuu muujinayaa in Vivo Z5i ay ahayd inuu ka bilowdo Shiinaha 1-dii Nofeembar. Taariikhda horay ayey u dhaaftay, taas oo tilmaamaysa taas waxaa laga dhigi karaa mid rasmi ah maalmaha soo socda. Taleefoonka casriga ah waxaa lagu heli doonaa seddex ikhtiyaar oo midab leh suuqa Shiinaha, kuwaas oo ah sida soo socota: Agate Black, Spar Blue, iyo Jade Porcelain Green.
Waxaa kale oo lagu sheegay taleefanka ayaa leh 6.54-inch IPS LCD shaashad ah oo leh FullHD + qaraarka oo ah 2,340 x 1,080 pixels iyo bucshiro qaab-biyood u eg. Processor-ka ku dhex jira waa Qualcomm's Snapdragon 675, halka xasuustiisa RAM iyo ROM, ay u kala horeeyaan, waa 4/6/8 GB iyo 64/128 GB. Batariga ay ku faanto waa 4,920 Mah Mah oo wuxuu leeyahay taageer si dhakhso ah loogu soo oogo 18 watts. A akhristaha faraha dambe ayaa sidoo kale la heli karaa.
On ay gadaal gadaal waxaa jira a sedex kamarad gadaal ah oo ah 16 MP + 8 MP + 2 MP iyo 16 MP oo toogta hore ah wuxuu ku yaalaa darajada. Dhanka software-ka, Android Pie waxaa horay loogu sii rakibay hoosta Funtouch 9.2. Astaamaha ku xirnaanta taleefanka waxaa ka mid ah 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, microUSB 2.0, iyo maqal maqalkiisu yahay 3.5mm. Jirka Vivo Z5i wuxuu ka sameysan yahay caag, cabirkiisuna waa 162.15 x 76.47 x 8.89 mm miisaankiisuna waa 193 garaam.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Qeexitaanka iyo qiimaha Vivo Z5i waa la dusiyay
Fosil Hybrid-ka cusub wuxuu ka tagayaa Wear OS